अब पराजुलीले गरेका फैसला के हुन्छन् ?| Nepal Pati
अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै सेयर लगानीकर्ताद्वारा आमरण अनशन शुरु
स्कुलबसको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार दुई जनाको मृत्यु
रुकुम पूर्वमा भोजको रक्सी सेवनबाट ३ जनाको मृत्यु
संघीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापन बारे भारतसँग सिक्दै मन्त्री पण्डित
राप्रपा संघीयता र गणतन्त्रको बिपक्षमा : अध्यक्ष थापा
गौतमको प्रस्तावमा प्रचण्डको साथ, ओली-गौतम टक्कर बैठकमै देखिने
अब पराजुलीले गरेका फैसला के हुन्छन् ?
- पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की
पराजुली पदमुक्त भएपछि अब के हुन्छ ?
न्यायापरिषदले उनको कागजपत्र छानविन गरेर पहिला नै गर्नुपर्ने निर्णय ढिला गरेको छ । वास्तविकता के हो ? न्यायाधीशको जन्ममितिको अभिलेख राख्ने न्यायापरिषदले पहिला नै बोल्नपर्थो । अब न्यायापरिषदले गरेको निर्णय अनुसार पराजुली साउनबाटै नै पदमुक्त भएको ठहर हुन्छ । त्यो निर्णय मान्ने हुन्छ ।
यो बिचमा उनले गरेका फैसला के हुन्छन् ?
उहाँले गरेका फैसला लागु नै हुन्छन् । लोकमानसिंह कार्की पदबाट मुक्त हुँदा पनि अगाडीको मितिबाट मुक्त भएका थिए । सर्वोच्च अदालतले अयोग्य भनेपनि निर्णयको हकमा योग्यताको प्रश्न उठेन । उहाँले धेरै निर्णयहरु गरेका थिए । ती निर्णय सबै सदर भए । पराजुलीको हकमा पनि उहाँले गरेका सबै फैसला कार्यान्वयन हुनन्छन् । अथवा उहाँले गरेका फैसला उल्टिदैनन ।
पराजुलीका लागि अरु केही विकल्प छन् ?
उहाँले अब न्यायपषिदमा निवेदन दिने । निर्णय चिक्त नबुझेकाले पुनःविचार गरि पाऊ भनेर निवेदन दिनुपर्छ । अथवा पूर्व प्रधानमन्यायाधीशमा रहेर सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ःन सक्नुहुन्छ । न्यायापरिषद विरुद्ध रिट हाल्ने हो भने उहाँले पूर्व प्रधानन्यायाधीशका हैसियतमा रिट दिनुपर्छ ।
रिट निवेदनको फैसलाले उनले न्याय पाउने सम्भावना हुन्छ ?
पराजुलले भने अनुसार हो भने न्याय पाउन पनि सक्नुहोला । तर, त्यसो भएन भने किर्ते गरेको अभियोगमा उहाँलाई जेल सजाय पनि हुन सक्छ ।
साउन यता उहाँले पाएको तलब चै के होला ?
उहाँले गरेका फैसला कार्यान्वयन हुन्छन भने साउन यताको तलब पनि फिर्ता गर्ने भन्ने हुँदैन । तर इतिहाँसमा एउटा नराम्रो समयका रुपमा दर्ज भएको छ ।
पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीसँगको कुराकानी
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमुक्त
487 पटक पढिएको
काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ...
काठमाडौं । प्रदेशसभामा सहमति नहुने भएपछि प्रदेश ३ ...
यहि मंसिर ११ गते बिजुलीको पोल र बजारमा देखिने छापा...
सुशासन र नैतिकता शब्दहरु आफैंमा केहि होइनन तर सभ्य...
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ...
बाजुरा र बझाङ जोड्ने सडक उद्घाटन
बाजुरा । गौमुल गाउँपालिका ६ घट्मुना देखि मेल्लख हुदै अन्तर जिल्ला जोड्ने सडक उद्...